Yenza i-thesis yakho ye-bachelor ibhalwe ngobungcweti ngama-papernerds ochwepheshe
Yenza umsebenzi wephrojekthi ubhalwe
Ukubambisana okucasulayo bekuyizolo! Ake silungiselele iphrojekthi yakho eyinkimbinkimbi nomsebenzi weqembu. Sisiza ngocwaningo, izinkomba, okuqukethwe, izethulo noma ukunikela ngephakheji ephelele
Umsebenzi wephrojekthi - zibhalele wena	noma	ake ubhale
Umsebenzi wephrojekthi ngesikhathi sezinga kufanele wenziwe ngezindlela ezahlukahlukene. Azikho izifundo ezithile zomsebenzi wephrojekthi. Le ndlela yomsebenzi wasendlini ibeka izidingo ezikhethekile kubafundi. Ngakolunye uhlangothi, kumayelana nokusebenza eqenjini. Ngakolunye uhlangothi, umsebenzi wephrojekthi ukhombisa ukuthi abafundi bafundile ukusebenzisa izimiso zethiyori. Umsebenzi wokuzimela uyadingeka futhi isayensi idluliswa eqenjini. Umsebenzi wephrojekthi ngakho-ke wenziwa ngamazinga ahlukahlukene. Ngokuphikisana nomsebenzi wasendlini wombhalo kuphela, imicabango ehlukahlukene kanye nezisombululo ezingaba khona kuxoxwa ngazo eqenjini. Engxoxweni, ngakho-ke, kubhekwa izinto ezintsha ezingabhekwa njengomsebenzi ozimele wethimba. Lokhu kwenza umsebenzi wephrojekthi uthakazelise kuwo wonke umuntu obandakanyekayo, kepha kudinga ingxenye enhle yokusebenza ngokubambisana kwamalungu eqembu. Ukubambisana kungumsebenzi wokubambisana hhayi ukuqaliswa kwemibono yakho ngokumelene nakho konke ukumelana eqenjini.
Kodwa-ke, ukukwazi ukusebenza eqenjini akusho ukuthi uzithobe kwamanye amalungu eqembu. Iqembu futhi liphila ngokungqubuzana nokugxekwa. Ukuxhumana ngaphakathi kweqembu ngakho-ke kuyinto ebaluleke kakhulu. Ukuxhumana kusho ukushintshaniswa kolwazi nezimpawu. Noma kunjalo, ukuxhumana kungaphezu nje kokukhulunywa. Amandla nekhono lokuxhumana ngolimi yilokho okuhlukanisa umuntu kuzo zonke izidalwa ezisemhlabeni. Izilwane nazo zinethuba lokuxhumana. Kepha lokhu kwenzeka kakhulu endaweni engakhulumi ngamazwi. Ukuxhumana kungaphezu nje kolimi. Inkambu ebanzi yamathuba angewona okokukhuluma ifaka ukushukuma komzimba, iphimbo lezwi nokubukeka ngenkathi kukhuluma. Eqinisweni, ukuxhumana ngamazwi kungu-10% kuphela walokho esikubonayo empeleni. Iningi lolwazi ludluliselwa ngaphandle kwamazwi. Isayensi yezokuxhumana idonsele ukunakekelwa kwe-gradation lapho imininingwane igcinwa khona enkumbulweni yethu: yi-10% kuphela yalokho okufundwayo okusetshenzwa kwimemori. Ingxoxo engama-20% igcinwa. Iningi - ama-70% asele olwazi adluliswa ngezimpawu ezingezona ezomlomo.
Imigomo yokusebenza ngokubambisana
Ngokusho kukaLencioni, The Five Dysfunctions of a Team (2002), kunezinto ezinhlanu ezibalulekile ezingasizi neze ukusebenza eqenjini.
Ngakolunye uhlangothi, kunemigomo ebonakalisa ukusebenzisana. Amalungu eqembu anentshisekelo enkulu emiphumeleni engatholwa ngesikhathi esithile. Isibopho eqenjini naseqenjini sibeka izintshisekelo zomuntu siqu ngemuva. Ubumbano oluholela njalo luholela empendulweni enhle. Ukukhiqizwa kweqembu kuza kuqala. Ukuthuthukiswa okuhlangene kwezixazululo zesayensi kubangelwa ukubekezelelana kwemibono ehlukene.
Usizo lobuchwepheshe ngomsebenzi wephrojekthi
Njenganoma yimuphi omunye umsebenzi wesayensi, umsebenzi wephrojekthi ubandakanya ucwaningo oluningi lwezincwadi nokubhalwa kwemiphumela (engaphelele). Ngesikhathi sezifundo zakho awudingi nje kuphela ukubhekana nomsebenzi wamanje wephrojekthi. Kufanele ulungiselele izivivinyo neminye imisebenzi yasekhaya ngasikhathi sinye. Uphelelwa yisikhathi ukuze ungaboni ukuthi kungenzeka yini ukuthi ubhale umsebenzi othile wephrojekthi ngesikhathi esinikeziwe. Kulokhu, kufanele usebenzise usizo lwenhlangano yethu yokubhala ghost. Ababhali bethu bavela kuyo yonke imikhakha yezifundo abaneziqu zaseyunivesithi ezihambisanayo. Ngakho-ke, akuyona inkinga enkulu ukuthi sigade umbhali ofanele wena nomsebenzi wakho.
Ukunikeza umsebenzi wephrojekthi yakho komunye wababhali bethu ngakho-ke kungumsebenzi wezomthetho. Ufaka umbhali wesipoki kuphrojekthi yakho. Ukushintshana okujabulisayo phakathi kwakho nathi noma umbhali wethu kuzokunikeza imininingwane emisha ongaxoxa ngayo engxoxweni yeqembu.
Irekhodi elibhaliwe lengxenye yakho kuphrojekthi liyisisekelo sokuhlolwa okulandelayo. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthola ibanga lokugcina elihle lapha. Ukuhambisana nenqubo yomsebenzi wesayensi kuqinisekiswa ngumsebenzi wethu. Ngaphambi kokuba kuthunyelwe kuwe umphumela wokugcina obhaliwe wengxenye yakho yomsebenzi wephrojekthi, umsebenzi udlula ezigabeni ezahlukahlukene zokuphathwa kwekhwalithi enkampanini yethu. Lokhu kufaka phakathi isheke lokukopela, elenziwa ngezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala ukuhlolwa komsebenzi ngesoftware yokukopela, njengoba okwamanje isetshenziswa emanyuvesi nasemakolishi. Sisebenzisa izinhlelo eziningi ezizimele zesoftware. Uma kunombiko wokukopela, umbhali wesipoki uzokwaziswa ngesicelo sokushintsha izingxenye ezifanele zombhalo.
Isinyathelo sesibili sifaka ukuhlolwa ngumphathi wethu wekhwalithi. Isheke lenziwa ngesandla ngokubheka izindima zemibhalo kwi-Intanethi.
Isinyathelo sesithathu ukuhlola ukuthi ukucaphuna kulungile. Zonke izingcaphuno zibhekwa phezulu futhi zihlolwe ukuthola ukulandisa okulungile.
Umsebenzi ubese uhlolwe ukuthi uhambisana ngokufanele yini nemithetho ebekiwe. Ukuhlelwa kuqukethe ukuhlela umbhalo
Ukuhlanganiswa kwamagama afanayo wokugwema ukuphindaphinda amagama
ukwakheka okunengqondo komsebenzi futhi
ukubheka ukunemba kwezitatimende ezenziwe.
Ukuhlelwa kobungcweti kuzoguqula umbhalo wakho wesayensi ube yiklasi lokuqala.
"Bengingeke ngifise umsebenzi wephrojekthi ongcono!"
Isiqu ku-Cultural Studies
Umnqamulajuqu wokufaka kwakho ususondele, kusamele ufunde futhi wazi ngezivivinyo ezizayo zaseyunivesithi Izinkinga zesikhathi ayikwazi ukuqhubeka? Ukwakhiwa kokusebenzisana kubuye kuthele izithelo ezincane futhi kugcine kube yinto ekhathazayo.
Akunankinga, silapha ukuzosiza! Nathi uthola usizo lochwepheshe kusuka kokuhlangenwe nakho futhi umbhali wesipoki onekhono, ngaphandle kwesihloko! Ababhali bethu besipoki banokubuka konke okuphelele futhi okusesikhathini kwezincwadi endaweni yabo yezihloko, bajwayelene kakhulu namagama afanele futhi bayazi ukuthi bangazisebenzisa kanjani izindlela eziqondene ngqo nezihloko ukwenza ngcono Umsebenzi wephrojekthi ukuqeda ngempumelelo. Nethimba lethu eceleni kwakho, ungafundela izivivinyo ezizayo futhi akusadingeki ukhathazeke ngomsebenzi wakho wesayensi Umsebenzi wephrojekthi yenza ngaphandle kokucindezeleka kweqembu.